Ukuphila | Ucanzibe 2022
Ngaba kukho uMkhuseli weLaphu eliNgesibi ityhefu?
Umbuzo: Siphinde sahlaziya isofa yethu entle kunye nelaphu lomqhaphu. Ngaba ikhona indlela engeyiyo inetyhefu yokutywina ilaphu kunye nokwenza ibala linganyangeki? Ndiqinisekile ukuba umthetho wokungatyi esofeni unganceda, kodwa ayisiyonyani! Usapho lwam belusebenzisa isitshizi esisebenza kakuhle, kodwa sinoluhlu olunzima lwezinto ezithunyelweyo ngu-ElissaUmhleli: ngu-Elissa, umsebenzi omkhulu kwi-reupholstery! Ijongeka ngathi yifenitshala entsha ngokupheleleyo.
Into omele uyijonge (kwaye uyiphephe) xa uthenga iRug-Pet Friendly- kunye no-5 kwezona zikhethiweyo
Sijonga ezona zinto zibalaseleyo (kubandakanya ijute kunye noboya) kunye nezinto ekufuneka siziphephe xa uthenga ityali efanelekileyo yesilwanyana.
Eyona nto uyifunayo kufuneka ukuba iSihlalo sakho seOfisi yakho ihlale ikhululekile
Inye into oyifunayo ukwenza ukuba usihlalo weofisi yakho akhululeke ngakumbi? Isitulo esihle esihlalayo. Sineengcebiso ezimbini kulo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali.
Enye yeendlela ezingenangqondo zokumisa iipakeji zakho zeAmazon ekubeni zibiwe
Ukubeka izandla kwiphakheji yakho akusoloko kulula njengezandi zeentsuku ezimbini zokuhambisa.
Mkhulu kangakanani Mkhulu kakhulu? Ukufumana iTV eyiyo, ayisiyiyo nje enkulu
50 ″, 60 ″, 70 ″, 80 ″ - ungaphakama kangakanani? Singathanda ukucinga ukuba kokukhona kubangcono xa kufikwa kwizikrini zikamabonwakude, kodwa eneneni kukho izithintelo ezininzi ezinyanzelisa ubungakanani beTV obufanelekileyo bendawo yakho. Jonga iingcebiso zethu malunga nendlela yokuqinisekisa ukubukeka kweTV, ukulingana, kunye nokuziva ulungile ekhayeni lakho. ingqwalaselo.
I-Eququette engekho mthethweni kwiRegistry (okanye ungayicela njani imali, ngembeko)
Ukuothuka kukamakhulu wakho obambe iperile, ngaphezulu kwama-70 epesenti yabantu abatshatileyo bahlala kunye ngaphambi komtshato kwezi ntsuku. Zizo izibini ezisixhenxe okanye ezisibhozo zezibini abathi, emva kokudlala indlu kunye iinyanga okanye iminyaka ngaphambi kokuba babophe iqhina, sele beyicacisile indlela yokuhlala kunye kwaye mhlawumbi banakho konke abakufunayo ngendlela yendlu.
I-Costco ithengisa iiTikiti ze-Universal Studios kwiSaphulelo esimangalisayo
Yiya kwiCostco uyokuthenga amatikiti amaxabiso aphantsi eStudios kwiholide yakho yosapho elandelayo.
Iindawo zethu esizithandayo zokuthenga izityalo zeFaxux kwi-Intanethi
Eyona ndawo intle yezityalo ze-faux, kubandakanya izityalo ezakhiwe ngombumbi, imithi kunye neebhotani.
Eyona ndawo iphambili yokuGcina uMoya ngaphakathi ukuGcina iiDrafti zePasky eBay
Kwimeko-bume engenaxesha lobusika lonke ixesha lasebusika, khetha enye yezona ndawo zilungele ukungenisa umoya ngaphakathi namhlanje.
Ixabiso elisetyenzisiweyo kwiTekhnoloji yokuThengisa ngokukhawuleza ngeMithetho engama-50 ukuya kwengama-10 ukuya ku-10
Nokuba uphucula imodeli entsha okanye uthatha isigqibo sokulahla ubunzima obufileyo, usenokwenza ipeni entle ngokuthengisa ngegiya yakho endala. Icebo kukwazi ukuba ulithengise njani ixabiso ngokuchanekileyo. Sifumene isikhokelo esilula sokukunceda ukuba ubuyisele izixhobo zakho ngexabiso elifanelekileyo-kwaye ulithengise ngemali ngokukhawuleza! Sisembindini wokuguqula igumbi lethu leendwendwe libe yiofisi yasekhaya, kwaye sithengisa intabalala. yezixhobo zobugcisa ezisetyenzisiweyo ukwenza indawo yezinto ezintsha.
Olona khetho luLungileyo lweeUniversal zeKati kunye nabanini beNja
Xa loo sofa yesonka e-velvet ibambe amehlo akho okokuqala, kulula ukucinga, ndingayenza ngokupheleleyo le nto, uFido uya kufunda ukuba akavumelekanga. Ilula njengoko kunjalo. Sonke besikhona, kodwa masibeyinyani. Nokuba uba yintlebendwane kwaye uyaphumelela ekuyigcineni isofa, oko akuthethi ukuba iyakuhlala icocekile.
Imali eyi- $ 30 yeBhanki akufuneki uyihlawule ukuba usebenzisa esi skripthi
Imirhumo engaphezulu kweedrafti, njengoko kuvela, iyaxoxisana, iingcali zemali zithi. Nantsi indlela yokuguqula umrhumo we-overdraft usebenzisa iskripthi esibonelelwe yingcali yezemali.
Abavavanyi beAmazon bathi le $ 60 yokufumana yimfihlo yokuGcina iMali kwiiBhili zaMandla
Ngophononongo olungaphezulu kwama-546 e-rave kwiAmazon, iMaxKare Electric Blanket yeyona nto ithengiswa kakhulu phantsi kwe- $ 60!
Isikhokelo esipheleleyo malunga nendlela yokuthenga iMatrasi
Ukukhetha umatrasi olungileyo ubilisa ukuya ekubeni nokuqonda okucacileyo kwe-ins kunye nokuphuma kwento equka enye. Silapha ukukunika lonke ulwazi oludingayo ukuze ukhethe ngokufanelekileyo.
Izinto ezi-9 zeOfisi yaseKhaya kufuneka uziThengise kwiVenkile yeDola
Ukusuka kwiipeni ukuya ephepheni kunye nakwi-faux succulents, unokufumana zonke iintlobo zohlahlo-lwabiwo mali lweofisi yasekhaya kwivenkile yakho yedola yendawo.
Kutheni kubalulekile ukuba ndinike izityalo zam igama
Nantsi indlela amagama amagama ezindlu zakho angakhi nje kuphela ibhondi eyomeleleyo, kodwa yomeleza ubuni bakho kunye nesityalo sakho.
Ekugqibeleni ndazinqanda ndaza ndathenga iperi yeeNgwenya- kwaye baTshintsha uBomi bam baseKhaya baba bungcono
Omnye umbhali ubonakalisa uhambo lwakhe kunye neeCrocs, athe wazithenga emva kokufudukela eNew York City ukusuka eNew York City ngexesha lobhubhane.
UTokimeku Uthetha kakhulu nangakumbi kovuyo lwesiJapan
Funda malunga nentsingiselo emva kwegama lesiJapan elithi tokimeku elisetyenziswe nguMarie Kondo eliguqulela ukonwabisa.
Uyakha njani ikiti yendalo yoncedo lokuqala.
Sineempendulo kuyo yonke imibuzo yakho yesityalo esivuthayo
Umahluko kuphela phakathi kwezithupha eziluhlaza kunye noobhontsi abamnyama, eneneni, lulwazi oluncinci.
lithetha ntoni u-11 11
lithetha ntoni 11 11 ngokomoya
Ithetha ntoni ingelosi u-111
lithetha ntoni i1212 ngokomoya
ukubona inani lama-222